के तपाईसंग अपिको सेयर छ ? दिनेभो बोनस र हकप्रद « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
के तपाईसंग अपिको सेयर छ ? दिनेभो बोनस र हकप्रद
काठमाडौ । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले २ सय प्रतिशत हकप्रद र ८ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको १४ औं वार्षिक साधारणसभाले शेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत बोनस शेयर कर बाहेक उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरुबाट १ः२ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्ने पस्ताव समेत पारित गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद शेयर निश्कासन गरी सिद्धकाली पावर लिमिटेडले निर्माण गर्ने त्रिशुली गल्छि आयोजना र सोलार आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने योजना पारित गरेको छ ।
अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले ८.५ मेगावाट क्षमताको नौगड गाढ जलविद्युत आयोजना संचालन गरिरहेको छ भने ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगड गाढ जलविद्युत आयोजना यही चैत्र मसान्त भित्र निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य लिएर कार्य गरिरहेको छ ।
कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खुल्ला टेण्डर प्रकृया बाट निष्कासन गरेको १८ मेगावाट क्षमताका ८ स्थानमा सोलार उर्जा उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ । कम्पनीको उक्त सोलार आयोजनाहरुको विद्युत खरिद विक्रि सम्झौता हुने क्रममा रहेको छ ।